‎Apple Podcast内のThiha Lu Lin's Travel & Lifestyle Podcast
This Podcast is hosted by Myanmar Blogger/Vlogger Thiha Lu Lin also known as Thiha, the Traveller. And it is about travel experiences, lifestyle and much more.
Thiha Lu Lin's Travel & Lifestyle Podcas‪t‬ Thiha Lu Lin
022 :: [Lifestyle] A Little More About Karen Traditional Weaving with Guest Piti
သောတရှင်များအားလုံး မင်္ဂလာပါ...ဒီတစ်ခါ ကျွန်တော့်ရဲ့ Podcast Episode (22) မှာတော့ "စိတ်ဝင်စားဘွယ်ရာ ကရင်ရိုးရာဂျပ်ခုတ်ပညာ" ဆိုတဲ့ စကားဝိုင်းလေး တင်ဆက်ထားပါတယ်။
ကရင်ပြည်နယ်ကို အလည်သွားရင် ကရင်ရိုးရာဝတ်စုံတွေ ဝယ်ယူဆင်မြန်းကြပေမဲ့ ကရင်ရိုးရာစစ်စစ်တွေ ရက်လုပ်တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ လေ့လာသိရှိလိုသူနည်းပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ ကရင်ရိုးရာဝတ်စုံတွေဟာ အတော်လေး စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတဲ့ ရက်လုပ်ပုံတွေ ရှိပါတယ်။ ကိုပီတ ဟာ ကရင်ပြည်နယ်မှာ ချစ်ခင်စွာ နေထိုင်နေရင်း ဈေးကွက်အောင်မြင်မှုနည်းလို့ တစထက်တစ တိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်လုဖြစ်လာတဲ့ ဂျပ်ခုတ်စစ်စစ်တွေကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ရင်း ဈေးကွက်မှာပါ အောင်မြင်နိုင်အောင် ကြိုးစားနေသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ခက်ခဲတဲ့ အခြေအနေတွေကြားမှာ ရအောင်ကြိုးစားနေရင်း ချည်ထည်ကို ဆိုးတဲ့ ဆေးကအစ သဘာဝက ရတဲ့ အရောင်တွေကို အသုံးပြုဖန်တီးနိုင်ဖို့ တီထွင်ကြံဆသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့ရဲ့ ဆိုင်မှာဆိုရင် ကရင်ရိုးရာအထည်တွေဟာ အခြားဆိုင်များနဲ့ယှဉ်ရင် ဈေးများနေတယ်ထင်ရပေမဲ့ ရောင်းချစရာနဲ့ ပြစရာ ပစ္စည်းမရှိတဲ့အထိ အရောင်းတွင်ကျယ်နေတတ်ပါတယ်။.ဒီနေ့ သူနဲ့ပြောဖြစ်တဲ့ စကားဝိုင်းလေးကနေ
ကရင်ဂျပ်ခုတ်ရိုးရာ ရဲ့ လားရာအခြေအနေ
ကရင်ရွာတွေမှာ ဂျပ်ခုတ်သူတွေရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အယူအဆများ
စတဲ့ စတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာတွေကို နားဆင်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
မင်္ဂလာပါ...ဒီနေ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ Podcast လေး Episode (21) မှာတော့ "ခရီးသွားရင် လိုအပ်သလို အသုံးချနိုင်မဲ့ Essential Oils ဆိုတာ ဘာလဲ" ဆိုတဲ့ စကားဝိုင်းလေး တင်ဆက်ထားပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဘယ်ပညာမှ သုံးစားမရတာ မရှိပါဘူး။ သိထားရင် အသုံးဝင်တာချည်းပါပဲ။ အခုလည်း ကျွန်တော် ခရီးသွားရင်း ရောက်တဲ့ဒေသတွေက အလေ့ကျဖြစ်ဖြစ် စိုက်ပျိုးပြီးဖြစ်ဖြစ် ပေါက်ရောက်တဲ့ အပင်၊ အသီး၊ အပွင့်တွေကနေ အသားအရေနဲ့ တစ်ကိုယ်ရည်ကျန်းမာရေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ Essential Oil ကို ထုတ်ယူလို့ရပြီး လိုအပ်သလို အလှအပအတွက်ဖြစ်စေ၊ ကျန်းမာရေးအတွက်ဖြစ်စေ အသုံးချနိုင်တယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။တလောက ကိုဗစ်ကပ်ကြီးကြောင့် ကျွန်တော်တို့ စိုက်ပျိုးတဲ့တောင်သူတွေ ရောင်းချမရဘူး၊ ပစ်လိုက်ရတယ်၊ အလကားဝေလိုက်ရတယ် စသဖြင့် အမျိုးမျိုးအခက်ကြုံကြရတယ်။ တကယ်တော့ တချို့သီးနှံတွေနဲ့ ပန်းတွေဟာ ကျွန်တော်တို့မှာ နည်းပညာ ပေးမဲ့သူ သေချာမရှိလို့ ဆုံးရှုံးလိုက်ကြရတာတွေပါ။ သမာရိုးကျ စိုက်ပြီး အစာအဖြစ်ပဲ ရောင်းချနေတဲ့အပြင်ကိုမှ တဆင့်တက်လှမ်းလို့ အစာအဖြစ် မရောင်းချနိုင်ရင် နောက်တစ်မျိုး ဘယ်လို ဖန်တီးကြမလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားရတော့မဲ့ အချိန်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ် မြင်တွေ့နေရတဲ့ အပင် အရွက် အသီး အပွင့် အမျိုးမျိုးကနေ Essential Oil ဆိုတဲ့ အသားအရေအတွက် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်မဲ့ မရှိမဖြစ်အရေးပါတဲ့ သဘာဝအဆီအမျိုးမျိုးကို အလွယ်တကူ ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်အရေးကြီးသလဲ၊ ဘယ်လို အသုံးချရမလဲ ဆိုတာတွေကိုတော့ ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Flawless Myanmar ရဲ့ Founder ဖြစ်တဲ့ မလွင်မာအောင် နဲ့ ခရီးသွားရင်းပြောဆိုထားသမျှကို တင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒါလေးကြည့်ပြီး ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတစ်ခု စဖို့ စိတ်ကူ
မင်္ဂလာပါဗျ...ဒီနေ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ Podcast လေး Episode (20) မှာတော့ "ခရီးသွားခြင်းနဲ့ သွားကျန်းမာရေး" စကားဝိုင်းလေး တင်ဆက်ထားပါတယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ သွားနဲ့ခံတွင်း စစ်ဆေးတာကို ရန်ကုန်၊ ပုလဲကွန်ဒို က DSC Dental Specialist Clinic မှာ လုပ်ဖြစ်ရင်းကနေ သဘောကျလို့ အဲ့ဒီက ဒေါက်တာ ဆုရည်အောင်စိုး နဲ့ စကားပြောဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဒီ Podcast မှာ ဘာတွေ ပြောဖြစ်သလဲဆိုရင် -
ဘာကြောင့် ကျွန်တော်တို့တွေ သွားကျန်းမာရေးစစ်ဆေးတာ လုပ်သင့်သလဲ?
ခရီးသွားရင် ဟိုတယ်၊ တည်းခိုခန်းနဲ့ အဝေးပြေးကားတွေက ပေးတဲ့ သွားတိုက်ဆေးနဲ့ သွားပွတ်တံတွေက သုံးစွဲဖို့ သင့်ရဲ့လား?
ခံတွင်းနံ့ပျောက်ဆေး နဲ့ ပီကေ တွေ သုံးတာရော တကယ်အကျိုးဖြစ်ရဲ့လား?
မနက်စာ မစားခင် သွားတိုက်ရမှာလား၊ စားပြီးမှ တိုက်သင့်တာလား?
ခရီးသွားနေသူတွေအတွက် သွားနဲ့ခံတွင်း ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲ?
ဆိုတာတွေ ကို စကားပြောဆိုထားပါတယ်။
ခရီးသွားဝါသနာပါသူတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ အချက်တွေချည်းပဲမို့ သေချာလေး နားထောင်ဖြစ်မယ် ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာ။